ny Laura Thomas-Gilks 19/06/2018
Train Tsidika, Train Travel Espaina, fiaran-dalamby Travel torohevitra, Travel Europe 0
(Last Nohavaozina: 02/10/2019)
Raha tapa-bolana mandany tany Espaina, iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana manodidina dia ny hijery Espaina lamasinina. Tsy izany ihany no hamela anao hahita zava mampino manerana ny firenena, fa lamasinina mandeha ao Espaina no tena mahomby sy mora. Ny sarotra indrindra dia ny mividy tapakila ny fiaran-dalamby. Ny fomba tsara indrindra mba hividy ny fiaran-dalamby tapakila to travel to Spain by Train is online. Misy maro ny tranonkala izay mamela anao hanao izany. Ny fanalahidy dia ny mahita olona izay miasa tsara indrindra ho anao eo amin'ny lafiny aina ny fampiasana, fiteny, ary ny teti-bola. Mividy ny tapakila tany am-boalohany mamela anao haka tombony ny tahan'ny mety manokana ary koa ny fanaovana antoka fa mahazo ny fiaran-dalamby tao izay tianao ho tanteraka alohan'ny namandrika.
Drafitra mialoha sy ny Bokin'i ny tapakila mialoha mba hahazoana ny tsara indrindra avy amin'ny fiaran-dalamby mandeha. Topazo maso ity tapa-bolana faritany haleha izy fa mandeha manodidina Espaina lamasinina. Aoka izany ho mpitari-dalana ho an'ny diany manaraka.
Izany no Espaniola renivohitra ary dia tsara ny fifangaroana na Taloha sy Vaovao, amin'ny valan-javaboary kanto, tsy mampino fiantsenana, vibey Nightlife ary mazava ho azy ny Malasana faritra. Madrid an-trano ihany koa ny maro ny Espaina ambony tranombakoka. Maro ny trano asa fantatra iraisam-pirenena. Satria be dia be ny manao amin'ity tanàna ity dia ny 3 andro eto dia ho tsara nandany. Tsara fanombohana ny tapa-bolana lavitra sy mora ny hahazo lamasinina ho avy na aiza na aiza eto. Madrid koa dia manana ny iray amin'ireo tsara indrindra gara any Espaina.
If you need other European Train Tickets, tsindrio fotsiny Eto ary mandehana amin 'ny tranonkala, ary mankafy ny mitaingina.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/spain-by-train/- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Train Travel Espaina fiaran-dalamby
Train Travel Scotland, Travel Europe 0
Train bola, Train Tsidika, Train Travel Italia, fiaran-dalamby Travel torohevitra 0